Nhau - Tsvina kwete, haidi kwete: Yakawanda sei kurongedza marara yakawandisa?
Tsvina kwete, haidi: Yakawanda sei kurongedza marara yakawandisa?
Kupakira kunofanirwa: chimbofungidzira nyika isina iyo.
Pakagara paine imwe mhando yekutakura uye paizogara paine, asi pane nzira here yekuti tirege huwandu hwekusvibisa nemarara zvinogadzirwa kubva kune izvi zvinodiwa zvehupenyu? Ndekupi kwatinoburitsa mutsetse mukubvuma kutambira chokwadi chekupakata tsvina muhupenyu hwedu?
Chimwe chezvinhu zvekurongedza zvakanyanya kutambanudza kuputira izvo zvinogona kuve zvine chepfu kuburitsa. Iyo inogarawo yakasimba izvo zvinoita kuti zviome kuti iore kana isina kudzokororwa. Uye, chokwadi ndechekuti, haasi makambani ese anodzokororazve, pachinzvimbo chekuti marara avo arongedwe nemakambani echitatu. Ko kana vazhinji vevagadziri nevaparidzi vacho vakatanga kutanga kugadzirisazve mapurasitiki, mapepa, uye makadhibhokisi avo? Ivo havangochengetedze chete mari, ivo zvakare vanobatsira kuchengetedza nharaunda kubva kune zvine ngozi zvinosvibisa.
Kana pamwe vangangowana imwe nzira yekutambanudza yekumonera uye zvimwe zvinhu zvekurongedza zvinogadzira marara zvakanyanya. Chinogoneka chinotsiva chinogona kuve palletized adhesives iyo inodzivirira kutsvedza kwezvigadzirwa kana zvakachengetwa pamapallet. Zvimwe zvekunamatira zvinogona kutodhura pane kutambanudza kuputira. Ivo vanogona zvakare kutoburitsa shoma kusvibiswa kugadzira. Tambo dzebungee dzinodzokororwa dzinogona zvakare kuita hunyanzvi hwekutsiva kuputira uku uchiri kubata zvigadzirwa munzvimbo. Kune mamwe mafuro anodonhedza kana anyorova. Izvi zvakanaka kune nharaunda, asi pamwe hazvina kukodzera kwazvo kutumira kana kuchengetedza.
Sezvo eco-inoshamwaridzika sekudzokorora yako yekurongedza marara ingaratidzika, haina kunyatso girini. Kuti ugadzire zvakare bepa nemakadhibhokisi, mapepa akasanganiswa nemvura kugadzira pulp sechinhu. Izvi zvinonetesa tambo kuitira kuti zvishandiso zvakadzoreredzwa zvisimbe, machipisi ematanda anowedzerwa mumusanganiswa wemaspuru pamwe chete nemamwe makemikari anobvisa tsvina.
Kana iwe usiri kukwanisa kudzokorora zvakare yako yekupakira zvinhu, edza kutenga zvinhu izvo zvinogadziriswa zvigadzirwa kuti zvigone kuora zviri nyore kana zvaraswa kana kuwana zvigadzirwa zvinogona kushandiswazve kakawanda, senge maairbags uye kurongedza nzungu. Kuderedza kurongedza kwemarara kunofanirwa kuve kwekutanga kumakambani anogadzira akawanda acho. Dzimwe nguva inogona kutora nguva uye kunetesa, asi, pakupedzisira, Amai Vemunhu vanokutendai.